मलेसियन रिंगिट, यूएई दिर्हाम र कोरियन वनको भाउ केही बढेको छ । - Gulf Sandesh
मलेसियन रिंगिट, यूएई दिर्हाम र कोरियन वनको भाउ केही बढेको छ ।
काठमाण्डौ – शुक्रबार मलेसियन रिंगिट, यूएई दिर्हाम र कोरियन वनको भाउ केही बढेको छ । अमेरिकी डलर, दिनार र कतारी रियालको भाउ भने केही घटेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार एक अमेरिकी डलरको खरिददर १०९ रुपैयाँ २१ पैसा र बिक्रीदर १०९ रुपैयाँ ८१ पैसा तोकेको छ । हिजो खरिददर १०९ रुपैयाँ ४१ पैसा र बिक्रीदर ११० रुपैयाँ ०१ पैसा तोकेको थियो ।
साउदी रियाल १ को खरिददर २९ रुपैयाँ १२ पैसा र बिक्रीदर २९ रुपैयाँ २८ पैसा छ । हिजो खरिददर २९ रुपैयाँ १७ पैसा र बिक्रीदर २९ रुपैयाँ ३३ पैसा रहेको थियो।
कतारी रियाल १ को खरिददर ३० रुपैयाँ र बिक्रीदर ३० रुपैयाँ १६ पैसा छ । हिजो खरिददर ३० रुपैयाँ ०५ पैसा र बिक्रीदर ३० रुपैयाँ २१ पैसा रहेको थियो। यूएई दिर्हाम १ को खरिददर २९ रुपैयाँ ७३ पैसा र बिक्रीदर २९ रुपैयाँ ९० पैसा छ । हिजो खरिददर २९ रुपैयाँ ९७ पैसा र बिक्रीदर २९ रुपैयाँ २५ पैसा रहेको थियो।
शुक्रबार मलेसियन रिंगिट १ को खरिददर २६ रुपैयाँ ५४ पैसा र बिक्रीदर २६ रुपैयाँ ६८ पैसा छ । बिहीबार खरिददर २६ रुपैयाँ ४४ पैसा र बिक्रीदर २६ रुपैयाँ ५८ पैसा थियो । कोरियन वन १ सयको खरिददर ९ रुपैयाँ ३१ पैसा र बिक्रीदर ९ रुपैयाँ ३६ पैसा छ । हिजो खरिददर ९ रुपैयाँ २६ पैसा र बिक्रीदर ९ रुपैयाँ ३१ पैसा थियो ।
शुक्रबार कुवेती दिनार १ को खरिददर ३५८ रुपैयाँ ९५ पैसा र बिक्रीदर ३६० रुपैयाँ ९३ पैसा छ । हिजो खरिददर ३५९ रुपैयाँ ३८ पैसा र बिक्रीदर ३६१ रुपैयाँ ३५ पैसा थियो । यस्तै बहराइन दिनार १ को खरिददर २९० रुपैयाँ २२ पैसा र बिक्रीदर २९१ रुपैयाँ ८१ पैसा छ । हिजो खरिददर २८९ रुपैयाँ ६९ पैसा र बिक्रीदर २९१ रुपैयाँ २८ पैसा रहेको थियो ।
← आजको राशिफल २०७६ साल असार २७ गते सुक्रवार नेपाल सम्बत ११३९ सन् २०१९ जुलाई १२ तारिख।
आजको राशिफल २०७६ साल असार २८ गते सनिवार नेपाल सम्बत ११३९ सन् २०१९ जुलाई १३ तारिख। →
आजको विदेशी मुद्राको विनिमयदर: कुन देशको कति ? सुचिसहित
September 28, 2018 GulfSandesh 0
आजपनि बढ्यो विदेशी मुद्राको विनिमयदर, कुन देशको कति ? (सुचिसहित)